मध्यरातमा भङ्ग गरेको संसद बोलाउने तयारीमा सभामुख सापकोटा ! - News20 Media
May 27, 2021 N20LeaveaComment on मध्यरातमा भङ्ग गरेको संसद बोलाउने तयारीमा सभामुख सापकोटा !
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाउने तयारी गरेका छन । आज कानुनविद र संविधानविदहरूसँग परामर्शपछि सापकोटाले यस्तो तयारी गरेका हुन ।
बिहीबार संविधानविद् र कानुनविद्हरुसँगको परामर्शपछि सभामुख सापकोटाले संसद अधिवेशन बोलाउने संकेत गरेका हुन्। जनताले प्रदान गरेको सार्वभौम अधिकार आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यस्तो संकेत गरेका हुन्।
परामर्श दिँदै केहि कानुनविदले उनलाई सक्रियता देखाउन र राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानको लागि सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए।
‘तपाईंहरुले भनेको कुरामा म पूर्णरुपमा सहमत छु। संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार नै मैले चल्नुपर्छ। नेपाली जनताले ३३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। संघीय संसद्को नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा देश, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार फेरि पनि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ’, सभामुख सापकोटाले भने।
सापकोटाले संविधान राष्ट्रका लागि भएकाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कदम निर्णय लिनुपर्ने बताए। ‘त्यसलाई व्याख्या, प्रयोग र अभ्यास गर्दाखेर हामीले राष्ट्रिय हित, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको विकासरविस्तार र सुदृढीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ’, उनले भने।
उनले देश र जनताको अधिकतम हितभन्दा बाहेक दायाँबायाँ अधिकार कसैलाई नहुने बताए। ‘त्यसैले देश र जनताको अधिकतम हित गर्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नेगरी काम गर्न तयार छु’, उनले भने, ‘जनताकै म्यान्डेट अनुसार गर्छु।‘
उनले संसद पुनःस्थापना भएपछि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको स्वीकार गरे। सभामुख सापकोटाले भने, ‘पुनःस्थापित संसदलाई प्रभावकारी नबनाउँदा पनि अहिलेको अववस्था आएको जायज हो। अदालतमा १४६, राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९ जना सांसद पुर्‍याएर जानुभएको छ
अध्यादेश मार्फत पर्सि बालुवाटरबाटै गरिँदैछ यस्तो ठूलो घोषणा, के होला ?
April 18, 2021 April 18, 2021 N20
नयाँ सरकारको गृहमन्त्रीमा उपेन्द्र यादव, नयाँ सरकार बनाउन बनाउने तयारी यस्तो छ